Tirada Kooxda Daacish ee Puntland oo sii kordhaysa – Radio Daljir
Tirada Kooxda Daacish ee Puntland oo sii kordhaysa
Noofember 9, 2017 7:17 b 0
Waxaa sii kordhaya tirada dagaalamayaasha kooxda Daacish ee ku sugan dhulka buuralayda ah ee Waqooyi Bari Soomaaliya , sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday QM.
Tirada dagaalamayaasha kooxda Daacish ayaa sanadkan korortay oo gaartay laba boqol oo dagaalame, halka sanadkii hore ee 2016 ay ahaayeen tiro tobaneeyo ah, sida lagu xusay warbixintan kasoo baxday quburo katirsan QM oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters
“Xitaa dhowr boqol oo dagaalamayaal hubaysan ah waxa ay xasilooni darro u keeni karaan gobolka” ayuu yiri sarkaal dhanka diblumaasiyadda xagga ammaanka, waxaana uu ku daray Mareykanka inuu garowsanyahay inay jirto marka la eego xaaladda kooxda Daacish qaybteeda Puntland inay yihiin kuwa sixad ah dhaaf ah u kordhaya.
Kooxda Daacish ee kasoo baxsanaya dalalka Ciraaq iyo Suuriya ee dagaalka lagula jiro ayaa sida saraakiisha ammaanka ah ay qabaan waxaa ay keeni kartaa inay qayb ka qaataan kororka kooxdan.
Hogaamiyaha Daacish ee Soomaaliya Cabduqaadir Muumin ayaa ka badbaaday duqaynta cirka oo Mareykanka uu ku doonayay Jimcihii inuu ku dilo, balse Cabdirisaaq Ciise Xuseen oo ah agaasimaha hay’adda sirdoonka ee Puntland ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters duqayntan in lagu dilay labaatan ka mid ah kooxda Daacish oo ay ku jiraan Suudaani iyo laba dagaalame oo carab ah.
Kooxda uu hogaamiyo Muumin ayay QM u rumaysantahay inay yihiin Soomaali,balse waxaa jira nin u dhashay wadanka Suudaan oo Mareykanku cunaqabatayn saaray, mana cadda inuu ku geeriyooday duqanta iyo in kale, kooxda ayaa sidoo kale xiriir dhow la leh wadanka Yemen.
“Dagaalamayaasha kooxda sii kordhaysa ayaa ayaa badankooda ah Soomaali kasoo jeeda koonfurta inkastoo ay ku jiraan dhowr ajnabi oo ka yimid wadanka Yemen” sidaasi waxaa sheegay Col. Cabdiraxmaan Siciid oo ah sarkaal dhanka militariga oo katirsan Puntland oo la hadlay Reuters.
Warbixinta QM ayaa lagu sheegay kooxda Muumin kasoo goostay inay dhaqaalaha iyo amarada ay ka helaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya, waxaana la sheegay inay jiraan software ay ku wada xiriiraan, inkastoo QM ay sheegtay inay si madaxbanaan u xaqiijin Karin aaladda ay xiriirka u isticmaalaan.
Qarax maanta kadhacay magaalada Muqdisho iyo khasaare kadhashay
Jan. Maxamed Faarax Caydiid: “Waxaan Rabnaa Ajnabigu in uusan na Faragelin oo noo kala Eexan (1993)”